Umshicileli wedijithali, Umshicileli we-UV kunye noMshicileli weDtg | Gxila
Ukugxila, Kukulungele ukuprintwa.
I-2 kwi-2 kunye ne-4 kwi-1 ye-Thirt ye-TICLET ngokujonga uMthengisi womshicileli we-DTG& Abavelisi | INGCACISO YOKUGCINWA
Yenzelwe ukuba kulula ukuba isebenze, ukubonelela nangemveliso yemveliso yenqanaba lemveliso, kunye nokuguquguquka ngakumbi, ukuguquguquka ngakumbi kunye nokungaphezulu kwengxowa yakho yokushicilela kunye nokuhombisa. Isebenza nzima kwaye ilunge ngakumbi kuwe, ukuze usebenze nzima ekukhuliseni ishishini lakho kunye nokutsalwa kwiimarike ezintsha.
I-China Gxibelela i-DTF DTF PHICS ASTPR ASPICT-INKQUBO Inc.
Kukho amaxesha apho kufuneka uqhubele phambili intengiso yakho iqhubele i-notch. Rhoqo, oko kufundwayo ngokwenene kuyafuneka ngokwenene sisibheno esikhethekileyo esinokuthi sibe sesona sitayile semveli. Ukugqibezela isinyithi kwipropathi yakho eprintiweyo kunokunika okona kuqhelekileyo 'okufunekayo' okufunekayo 'kunye ne-aesthetics efunekayo ukwenza ifuthe. Ayizizo kuphela ezi mveliso zibonakala zilungile, zikwadlulisa imvakalelo yokufumana iklasi kunye nomgangatho.Zimbini iindlela onokusebenzisa ngazo i-metric Gqibezela ukwenziwa kwentengiso yakho-i-foil ye-metallic stamping kunye ne-inki ye-inki. Ngelixa zombini ezi ndlela zisetyenziselwa ukuphucula i-aesthetics kwaye zinike i-giny gleam kwiiprinta zakho, zahluka kakhulu, zombini eziqhumayo neziphumo.I-metallic Fielting, njengoko igama libonisa, yinkqubo yokuthetha i-foil kwi-stock yakho ngobushushu kunye nengcinezelo. Ukubeka nje, kuthetha ukunamathela kwi-foil kumphezulu wokhetho lwakho olungawukhupheli kuphela, kodwa ukuthungwa ngokunjalo.Kwelinye icala, ukuprinta i-inki ze-IK yinkqubo eyahlukileyo ngokupheleleyo. Isebenzisa uhlobo olukhethekileyo lwe-inki exutywe namasuntswana ensimbi, ayinike i-metallic fritha. I-inki isetyenziswa kuqala kwinkqubo yokuprinta, kodwa ukufumana isiphumo esifunekayo, inokufuna iingubo ezilandelayo.
Nikela imveliso A3 seDTF umshicileli omtsha kunye iintloko print Epson F1080 ezimbini Inkqubo yokushicilela!
I-Inc yeTekhnoloji yeDijithali Com., Ltd.wamiselwa eShanghai, China, ongumenzi waba ngu-R&D Owona mshicileli we-DTG ofanelekileyo, onokubakho we-DTG, i-Digital Uv Platled Plat, imiqondiso&Iimveliso zentengiso. Ngeminyaka eli-17 yamava, sinokwazi ukubonelela zonke iimveliso ngexabiso elifanelekileyo kunye nenkxaso yexesha lokwenyani elithi le ntambo yethu yemveliso, iinjineli eziqengqelekayo, iinjineli ezingqongqo, i-Altitudinal Inyathelo elinoxanduva.Umsebenzi wethu kukwenza esona sisombululo sihle soMzi-mveliso wokushicilela wamazwe jikelele!Wamkelekile ukutyelela inkampani yethu kwaye uqhagamshelane nathi.Silinde wena! :)
Gxila iprinta i-UV yebhola yegalufa! Umboneleli& Abavelisi | INGCACISO YOKUGCINWA
Shicilela iinkuni, isinyithi, i-cestics, i-cerimics, i-Acrylic, iglasi, isikhumba, ilitye kunye ne-UV edibeneyo ye-UV ivela kwi-Inc yokuNgcamka.! Ngokuphathelele ngqo ekuqondeni nasekuthetheleleni amandla okuprinta, uya kuba nokuguquguquka kwemfuneko yokuprinta uyilo lwesiko kwiimveliso ezahlukeneyo - ngokukhawuleza nangokulula. Kwaye, ngamnye wabashicileli bethu i-UV iza nenkonzo ebalaseleyo yabathengi kunye nesoftware, ukuze uphumelele ukwazi ukuba iqela lakho liya kuba noqeqesho nenkxaso efunekayo ukugcina ukuvelisa kuqhuba kakuhle.
Ukonga ixesha namandla omthengi, sibonelela ngenkonzo ethi "YIMA NYE" equka irejista yeziko lemibuzo, imfuneko yoMbuzo, Ukuphatha ingxaki, ukuxilongwa kwi-Intanethi, ukuthunyelwa kweenxalenye zeSpare kunye nokubuyisela ukuthunyelwa.Ifilosofi yethu yokulawula: Inzuzo elinganayo, ukuQala kunye noBuntu. Injongo yethu yokugqibela: Ukwanelisa iimfuno zentengiso; bonelela ngesona sisombululo silungileyo kumthengi, konke esikwenzayo, konke ngenxa yakho.Umgaqo wenkonzo yethu:ugqithise umnqweno wakho, ukuba yinkampani yeNkonzo yoLwandiswa.Ukuthembeka kwethu kunye nemfezeko:Intembeko kunye noxanduva lobuqu kubo bonke ubudlelwane.
Ukonga ixesha namandla omthengi, sibonelela ngenkonzo ethi "ONE STOP" ebandakanya irejista yeziko lokufowuna, umbuzo ofunekayo, Ukuphatha ingxaki, ukuxilongwa kwi-Intanethi, ukuthunyelwa kwee-Spare parts kunye nokubuyisela ukubuyisela.
Ifilosofi yethu yoLawulo
Inzuzo efanayo, uTshintsho kunye noBuntu.
Injongo Yethu Yokuqokelelwa
Ukwanelisa iimfuno zentengiso; bonelela ngesona sisombululo silungileyo kumthengi, konke esikwenzayo, konke ngenxa yakho.
Umgaqo Wethu Wenkonzo
Ugqithise umnqweno wakho, ukuba yinkampani yeNkonzo yoKwandiswa.
Ukuthembeka kwethu kunye neMfezeko
Ukuthembela kunye noxanduva lomntu kubo bonke ubudlelwane.
Gxininisa i-Digital Technology Co., Ltd (irejista yokubhalisa kwi-Intanethi). yasekwa eShanghai, eTshayina. Yeyiphi na umenzi wokudala kwaye avelise eyona DTG ingcono kwaye inokubakho ngqo kumshicileli wengubo, idijithali ye-LED-UV umshicileli we-flatbed, umatshini wonyango, ikhompyuter yeCTS kwiscreen sokucinga, iimpawu&Iimveliso zentengiso kubathengi. Besime kwisisombululo se-Ready-To-Print. Siye sagxininisa kule ntsimi yoshicilelo lwedijithali kangangeminyaka eli-17. Sibonelela ngazo zonke iimveliso ngexabiso elifanelekileyo kunye nenkxaso yexesha lokwenyani sixhomekeke kumgca wethu wemveliso, amava obugcisa, itshaneli yokuthenga iindawo ezingqongqo kunye nenyathelo elinoxanduva lokujonga izinto, sigxile kwimarike ukubonelela ngeendaba eziphambili zamva nje kunye nokudala iimveliso ezinengeniso, zethu. Iqela lenkxaso yamava liqokelele bonke ubuchule kwaye lifumane olona qeqesho lutsha kwangexesha ukunika eyona nkxaso ibalaseleyo.
Bonke abathengisi banokujongana nezi ngxaki: Umgangatho olungileyo kodwa ixabiso eliphezulu, Ixabiso elifanelekileyo kodwa inkonzo embi, inkxaso elungileyo kodwa umgangatho ombi, intlawulo engabalulekanga, abanakufumana uqeqesho olupheleleyo, abanako ukufumana inkxaso yexesha lokwenyani, Ukuphendula kulibaziseka njengoviwo olunzima. kunye nesicelo. Ugxininiso lwedijithali yinkampani yokusombulula olu hlobo lwengxaki kuwe maximal Senza njani?-----------Rigorious "CHAIN ​​EZINE" ulawulo lobulunga; Ixesha langempela "LONG-DISTANCE-LOG-ON -DIAGNOSIS" Inkxaso; Inkonzo "ENYE STOP" Sibhekiselele kwi-rigory " I-Chain emine (Ulawulo lwesebe lezinto eziphathekayo-Hlanganisa ulawulo lomgca-QC ulawulo lwesebe-Logistic ulawulo lwesebe ") inkqubo yokulawula umgangatho ukuqinisekisa ukuba zonke iimveliso zilungile phambi kokunikezelwa, Kodwa akukho mveliso i-100 I-% igqibelele,Ixesha lokwenyani kunye nenkxaso esebenzayo yeyona nto ibalulekileyo, umthengi unokufumana inkxaso yexesha langempela ngenkxaso yethu ye-ONLINE kunye ne-LONG-DISTANCE-DIAGNOSE INKXASO yokuqinisekisa ukuba zonke iingxaki kunye nemibuzo inokusombulula ngokukhawuleza. Kwakhona siqokelela zonke iingxaki kunye ukwenza njengamaxwebhu esisombululo, ukuze umthengi akwazi ukukhuphela kwi-ftp yethu ngokukhawuleza.
Siye sagxininisa kule ntsimi yoshicilelo lwedijithali kangangeminyaka eli-17.
Ilizwe / Ummandla
I-China injani i-India-IIndian I-India Presute i-UV kunye noMshicileli we-DTG eTshayina? Abavelisi-Inc
Iarhente yehlabathi ifunwaUkugxila Inc. ifuna iiarhente zehlabathi kunye nabasasazi kwihlabathi liphela.Nabani na onomdla kwaye eqinisekile ukuba abe yiarhente yethu, nceda uqhagamshelane nentengiso yentengiso kwi-Info@Focusij.com
Umthengisi wokubonisana nabathengi& Abavelisi | INGCACISO YOKUGCINWA
Umsebenzi olungileyo kugxile kubathengi ekugxilwe kuzo, zinobungcali ngakumbi, ishishini lihamba ngcono kwaye libhetele.Yiza usebenze ne-Inc yethu egxile kwi-Inc., yazi ngakumbi malunga nabashicileli, wazi ngakumbi malunga nentengiso kwaye unike iimveliso ezilungileyo kwintengiso.
Abathengi bandwendwela iOfisi yeNdawo yokuGxilisa kunye nomzi mveliso
Ukugcina ixesha lomthengi kunye namandla, sinika "ukumisa" okuquka irejista yeziko lemibuzo, imfuno yomibuzo, ukuphathwa kwengxaki, ukuhanjiswa kwe-Intanethi kunye nokubuyela kwi-intanethi kunye nokubuyela kwi-intanethi kunye nokubuyela phambili.Ukulawula intanda-bulumko yethu: Ukuxhamla izibonelelo, ubuchule kunye noluntu.Injongo yethu yokugqibela: Yanelisa iimfuno zentengiso; Nikezela ngesisombululo esihle somthengi, konke esikwenzayo, nonke.Inkonzo yethu ye-Tenet: igqitha umnqweno wakho, ukuba yinkampani yenkonzo yokwandisa.our inokuthenjwa kunye nentembeko: Intembeko kunye noxanduva lomntu bonke.
Ilizwi labathengi be-DTG Printa Primers Athena Jet Plus kwi-Inc.
Sivuya kakhulu ukuba iimveliso zethu zinceda abathengi baqonda ukuba ubomi babo bube nemifanekiso kunye nezicwangciso. Ukuba ufuna ukubukela ividiyo, unokufumana ukuphefumlelwa kwividiyo.